နေတိုးငယ်ဘ၀အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ မွေးရပ်မြေက ဆရာမများ - Cele GabarCele Gabar
နေတိုးငယ်ဘ၀အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ မွေးရပ်မြေက ဆရာမများ
Published: April 4, 20197:54 pm
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလေး ဖြစ်တဲ့နေတိုးကတော့ သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုတွေ ရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ မွေးရပ်မြေရခိုင်မှာ မင်းသွေးနဲ့အတူ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး လှူဒါန်းမယ့် ကြေးသွန်းဘုရားကြီး ကို ဘုရားနေကဇာတင် ပွဲအတွက် ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက် ရခိုင်ပြန်တာဟာ နှစ် ၂၀ကျော်ကြာ မပြန်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ကို ပထမဆုံး ပြန်တာဖြစ်ပါတယ် ။
မွေးရပ်မြေက နေတိုးကို စာသင်ခဲ့တဲ့ ဆရာမတွေကလည်း နေတိုးရဲ့ငယ်ဘ၀ အမှတ်တရတွေကို ခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ နေတိုးက ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းအေးတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထူးချွန်ပြီး ဥာဏ်လဲကောင်းတဲ့အပြင် စာလဲလိုချင်ပြီး ဆရာ ဆရာမတွေ ပြောတာလဲ နားထောင်တဲ့ကလေး ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာမ ဒေါ်သိန်းမြိုင်က ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာမ ဒေါ်ခင်စောနန်းရင်ကတော့ နေတိုး ၈တန်းတုန်းက ကျူရှင်သင်ခဲ့တဲ့ ဆရာမဖြစ်ပြီး နေတိုးက စာသင်ဖို့လာရင် ခေါင်းရင်းမှာထိုင်ပြီး ကိုယ့်လက်မလေးပဲ ကိုယ်ကိုက်နေတတ်တယ် ၊ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေက ချစ်လို့ခင်လို့စတာကိုလည်း အရမ်းခံခဲ့ရတယ် ၊ ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ အရမ်းအေးပြီး ဂစ်တာလေးပဲတီးနေတတ်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ အထက်တန်းပြ ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်မြင့်ရီကတော့ နေတိုးက ပန်းချီအရမ်းတော်ပြီး ငယ်ငယ်က ပန်းချီတွေဆွဲပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်း ဆုရတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ကဲ နေတိုးကတော့ ငယ်ငယ်ထဲက အရမ်းအေးပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော် ။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရော နေတိုးကိုချစ်ရဲ့လား ???
နတေိုးငယျဘဝအကွောငျးကိုပွောပွတဲ့ မှေးရပျမွကေ ဆရာမမြား
ရခိုငျတိုငျးရငျးသားလေး ဖွဈတဲ့နတေိုးကတော့ သရုပျဆောငျလောကမှာ ထိပျတနျးမငျးသားတဈယောကျ အဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ မငျးသားတဈယောကျ ဖွဈသလို သူ့ရဲ့ပီပွငျတဲ့သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ အကယျဒမီဆုတှေ ရရှိထားတဲ့ မငျးသားတဈယောကျပါ ။ လတျတလောမှာတော့ မှေးရပျမွရေခိုငျမှာ မငျးသှေးနဲ့အတူ မိသားစုဝငျတှေ အားလုံး လှူဒါနျးမယျ့ ကွေးသှနျးဘုရားကွီး ကို ဘုရားနကေဇာတငျ ပှဲအတှကျ ပွနျလာခဲ့ပါတယျ ။ ဒီတဈခေါကျ ရခိုငျပွနျတာဟာ နှဈ ၂၀ကြျောကွာ မပွနျဖွဈတဲ့ ရခိုငျကို ပထမဆုံး ပွနျတာဖွဈပါတယျ ။
မှေးရပျမွကေ နတေိုးကို စာသငျခဲ့တဲ့ ဆရာမတှကေလညျး နတေိုးရဲ့ငယျဘ၀ အမှတျတရတှကေို ခုလိုပွောပွခဲ့ပါတယျ ။ နတေိုးက ငယျငယျတုနျးက အရမျးအေးတဲ့ ကလေးလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ထူးခြှနျပွီး ဉာဏျလဲကောငျးတဲ့အပွငျ စာလဲလိုခငျြပွီး ဆရာ ဆရာမတှေ ပွောတာလဲ နားထောငျတဲ့ကလေး ဖွဈတယျလို့ ဆရာမ ဒျေါသိနျးမွိုငျက ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။ ဆရာမ ဒျေါခငျစောနနျးရငျကတော့ နတေိုး ၈တနျးတုနျးက ကြူရှငျသငျခဲ့တဲ့ ဆရာမဖွဈပွီး နတေိုးက စာသငျဖို့လာရငျ ခေါငျးရငျးမှာထိုငျပွီး ကိုယျ့လကျမလေးပဲ ကိုယျကိုကျနတေတျတယျ ၊ သူငယျခငျြးမိနျးကလေးတှကေ ခဈြလို့ခငျလို့စတာကိုလညျး အရမျးခံခဲ့ရတယျ ၊ ကနျြတဲ့အခြိနျကတော့ အရမျးအေးပွီး ဂဈတာလေးပဲတီးနတေတျတယျလို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။ အထကျတနျးပွ ဆရာမတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဒျေါခငျမွငျ့ရီကတော့ နတေိုးက ပနျးခြီအရမျးတျောပွီး ငယျငယျက ပနျးခြီတှဆှေဲပွီး ပွိုငျပှဲဝငျတိုငျး ဆုရတယျလို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။ ကဲ နတေိုးကတော့ ငယျငယျထဲက အရမျးအေးပွီး ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ သူတဈယောကျဆိုတာ ပရိသတျတှသေိလောကျပွီထငျပါတယျနျော ။ CeleGabar ပရိသတျကွီးရော နတေိုးကိုခဈြရဲ့လား ???
Previous Previous post: ဆရာတော်၊ သံယာတော်တွေကိုမှ ထူးထူးခြားခြား ချစ်ခင်ကြည်ညိုတတ်လွန်းတဲ့ မယ်လိုဒီရဲ့ သားလေး သိန္ဒိစစ်
Next Next post: အကြမ်းစား MTV တစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်ကိုချပြလိုက်တဲ့ ရိုတ
(၇)နှစ်ကြာနားခဲ့တဲ့ ဂီတလမ်းကို သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ စတင်လိုက်တဲ့ သေရွာပြန် မီးမီးခဲ
Published: January 30, 20195:31 pm Updated: 5:56 pm